काँग्रेसमा किचलो, देउवाविरुद्ध सुजाता निवासमा गोप्य बैठक, को-को भए सहभागी ? — Imandarmedia.com
काठमाडौं । काँग्रेस भित्रको किचलो झन् बढेर गएको छ । स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा सर्बनाक हार बेहोरेको नेपाली कांग्रेस भित्र देउवा र पौडेल गुट बाहिरै देखिने गरी आफ्ना गतिविधि गर्न थालेको छ ।
पार्टीले हार बोहोरेको बारेमा सभापति देउवाले खासै आत्मालोचना नगरेको भन्दै असन्तुष्ट रहेका देउवा इतरका नेताहरुले अलग्गै बैठक, भेला गर्ने गरेका छन् । यस्तै नेतृ सुजाता कोइरालाको निवासमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा इतर समूहका नेताहरुको गोप्य लञ्च मिटिङ भएको छ ।
मण्डिखाटारस्थित कोइरालाको निवासमा भएको भेलामा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहका साथै नेताहरु रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, डा. शेखर कोइराला सहभागी थिए ।
पौडेल र सिटौला समूहमा ६ नेता लगातार पार्टी नेतृत्वविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्दै आएका छन् । पूर्वमहामन्त्री कृष्ण सिटौला भने राजधानीबाहिर भएका कारण अनुपस्थित रहेको समाचार श्रोतले बताएको छ ।
पार्टी भित्रको विवाद बढ्दै गएपछि महामन्त्री शशांक र नेतृ कोइरालालाई पनि आफ्नो गुटमा समावेश गर्न सुजाता निवासमै भेला आयोजना गरिएको काँग्रेस नेताहरुको अनुमान छ ।
निर्वाचनमा हार खादाको पिडा यथावत हुँदाहुँदै मधेशमा छुट्टै राजनितिक दल चलाउदै आएका विजयकुमार गच्छदारसँग पार्टी एकता गरी उनलाई उपसभापति बनाएपछी काँग्रेस भित्रको विवाद झन् भित्रभित्रै भुसको आगो झैँ बढीरहेको छ ।
सुजाता निवासमा गोप्य भेला गरेको पौडेल-सिटौला समूहले पार्टीलाई सुदृढ बनाउन सामूहिक पहल गर्ने र त्यसका लागि आन्तरिक अभियान नै संचालन गर्ने निष्कर्ष निकालिएको बताइएको छ ।
निर्वाचनमा हार बेहोरेपछि काँग्रेस भित्र पार्टी सुद्धिकरण अभियान संचालन गर्नुपर्ने भन्दै युवा नेता गगन थापा लगायतका नेताहरुले यसअघि नै बानेश्वरमा यस्तै छुट्टै गोप्य भेला गरिसकेका थिए ।